နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်တွေမှာ ‘ထိပေါက်’ ဂိမ်းလေးကို ဆော့ပြီး ကံစမ်းမယ် ｜ Event News TRUSTY E-Commerce
နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်တွေမှာ ‘ထိပေါက်’ ဂိမ်းလေးကို ဆော့ပြီး ကံစမ်းမယ်
နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်တွေမှာ MPT4U App မှာရှိတဲ့ ‘ထိပေါက်’ ဂိမ်းလေးကို ဆော့ပြီး ကံစမ်းနိုင်ဖို့အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါးလိုက်ပါတယ်နော်။
MPT4U App မှတဆင့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်မယ် ဒါမှမဟုတ် ထောဘီ ပက်ကေ့ချ်၊ PUBG ပက်ကေ့ချ်၊ Special Offer ပက်ကေ့ချ်များ နှင့် သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အခြားပက်ကေ့ချ်များ ဝယ်ယူပြီး ရရှိလာသော Chance များအတိုင်း” ထိပေါက်” မှာ ကံစမ်းရင်း သက်ဆိုင်ရာ ဆုလက်ဆောင်များကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင်က MPT Club အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ Crown နှင့် Diamond အဖွဲ့ဝင်ဆိုလျှင် တနေ့ကို ၃ကြိမ် ‘ထိပေါက်’ဆော့ပြီး ကံစမ်းနိုင်မယ်၊ Platinum အဖွဲ့ဝင်ဆိုလျှင် ၂ကြိမ် နှင့် Gold, Silver အဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင် တော့ တနေ့ကို ၁ကြိမ် ကံစမ်းပြီး up to 100 points အထိ ဆုလက်ဆောင်တွေလည်း ကံထူးနိုင်အုံးမှာပါနော်။
ကဲ … ဒီလောက်ထိ ကံထူးခွင့်တွေအများကြီးရရှိနိုင်မယ့် ‘ထိပေါက်’ဂိမ်းလေးကို ဆော့နိုင်ဖို့အတွက် MPT4U App ကို ဒီမှာ http://bit.ly/4UFreeDL အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပြီး၊ Google Play Store နှင့် Apple Store အတွက် Google Play Store: http://bit.ly/2z4ZhrJ, Apple Store: http://apple.co/2yNZJWY တို့တွင်လည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်လေးမှာ မပျင်းရလေအောင် အခုပဲ MPT ရဲ့ ‘ထိပေါက်’ ဂိမ်းလေးဆော့ပြီး ဆုလက်ဆောင်တွေ ရယူကံစမ်းလိုက်ရအောင်။
Let us to inform good news about MPT customers can play ‘Hti Pauk’ Game in MPT4U App and win the prizes during holidays. Top-up bills via MPT4U App, or buying Htaw-B Package, PUBG Package, Special Offers Packages, and other packages and get chance to play ‘Hti Pauk’ and win the prizes.
Moreover, if you are MPT Club member, for Crown & Diamond members can get chance (3) times per day to play ‘Hti Pauk’, for Platinum members can get chance (2) times per day and then Gold & Silver members can get (1) chance per day for playing ‘Hti Pauk’ and win up to 100 points.
So, let’s play ‘Hti Pauk’ game in MPT4U app and you can free download App here http://bit.ly/4UFreeDL.
For Google Play Store: < http://bit.ly/2z4ZhrJ>
For Apple Store: http://apple.co/2yNZJWY
Not to be bored your holidays, let’s play ‘Hti Pauk’ game in MPT4U App and win the prizes!